Ilali iMt Baw Baw-iApartment yeAltitude 2 - I-Airbnb
Ilali iMt Baw Baw-iApartment yeAltitude 2
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMt Baw Baw
Ifakwe kumbindi weMount Baw Baw Alpine Village, iAltitude Apartment yindawo enkulu yokubaleka unyaka wonke. Le ndlu inekhitshi elinefriji, i-oveni, i-microwave, i-dishwasher kunye nazo zonke izinto zokuthambisa, indawo yokuphumla epholileyo, igumbi lokuhlambela kunye namagumbi okulala amabini. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi yokumkanikazi kwaye igumbi lesibini linebhedi, elinebhedi ephindwe kabini emazantsi kunye nebhedi eyodwa phezulu. Yonke ilinen ibonelelwe.
Ifakwe kwilali yaseMount Baw Baw Alpine Resort ungayonwabela indawo entle yealpine unyaka wonke!
Ibekwe entliziyweni yelali uya kuba ngaphezulu kweentsini zekhephu kumgangatho wesibini wesakhiwo solawulo. Ehlotyeni jonga iindlela ezininzi zokuhamba intaba ezijikeleze ilali okanye ungene ngakumbi kwipaki yesizwe (engekude kwi-Alpine Walking Track), zama ukukhwela ibhayisekile entabeni (ukuhamba ngebhayisekile ezintabeni ngokuqhelekileyo kufumaneka ukusuka ngoDisemba) okanye ubhalisele ithegi yelaser okanye iseshoni yokuhlasela ngotolo kunye Iqela labahlobo okanye usapho, okanye uthathe iidingo zethu zabahlali ukuba sihambe! Ebusika sinikezela nge-skiing, i-snowboarding, i-tobogganing kunye nokukhwela izinja ze-sled.
Uya kuba luhambo olufutshane (100m) ukusuka kwindawo yokutyela ephakathi kwelali enemibono enomtsalane ngaphezulu kweGippsland.
4.68 · Izimvo eziyi-44
IMount Baw Baw Alpine Resort yeyona ndawo ikufutshane eMelbourne ekwehleni yokutyibilika enikezela ngamava ekhephu amnandi, akhuselekileyo kwaye afikelelekayo ngobusika kunye neeyure ezingapheliyo zohambo lwangaphandle unyaka wonke. Indawo yokuphumla ibekwe malunga neeyure ezi-2.5 ukusuka eMelbourne. Amava okuhla ezantsi kunye nokuwela ilizwe lokuhamba ngebhayisekile, uphonononge iintyatyambo kunye nezilwanyana kwiindlela ezihamba etyholweni ezijikeleza ilali kunye neBaw Baw National Park (kubandakanya i-Australian Alps Walking Track) kwaye uphumle kwaye uphumle, ujikelezwe luxolo. kunye nokuzola kweentsini zekhephu ze-alpine.
Ngokuziva kwayo kwilali esondeleleneyo kunye nethambeka elikhuselweyo iMount Baw Baw yindawo yokuqala yokufunda okanye ucule kakuhle izakhono zakho zesnowsports ebusika (ngoJuni-Okthobha) okanye ehlotyeni ungayonwabela indawo yendalo kwenye yeendlela zethu ezininzi zokuhamba ematyholweni, qesha intaba. iibhayisekile okanye incwadi kuhlaselo lokutolika okanye iiseshini zethegi ye-laser. Sikwanazo needingo ezimbini zokuhlala kwiDingo Resource Centre ungandwendwela okanye ubhukishe amava ohambo lwedingo ngeeNkonzo zeeNdwendwe.
Nceda uqaphele ngokubanzi akukho khephu ehlotyeni nasentlakohlaza (Novemba-Meyi) kodwa yilungiselele yonke imozulu njengoko ngamanye amaxesha kukhe kube nekhephu ngaphandle kwasebusika kwaye ngamanye amaxesha kunokuba nomoya. Ngokubanzi imalunga ne-10 degrees epholileyo kunasentabeni, nceda uqinisekise ukuba upakisha ngokufanelekileyo.
Ehlotyeni ilali inendawo yokutyela evulelwe isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini yonke imihla kunye nesidlo sangokuhlwa ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku ngokuxhomekeke ekubhukishweni kwangaphambili. Iiyure zokuvula indawo yokutyela zinokutshintsha ehlotyeni, nceda ufowunele ngaphambili ukuze uqinisekise. Ebusika kukho indawo yokutyela, iAlpine Bar kunye neBistro kunye neevenkile eziqashisayo zokutyibiliza ekhephini ezilalini ezivula yonke imihla.
Akukho suphamakethi okanye isikhululo sepetroli entabeni ngoko kungcono ukucwangcisa oku ngaphambi kokufika.
Umbuki zindwendwe ngu- Mt Baw Baw
Iinkonzo zeeNdwendwe ziyafumaneka ngo-9am - 5pm yonke imihla ukunceda ngokungena/ukuphuma okanye nantoni na oyifunayo, ebekwe kwindawo yokupaka iimoto 1.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Baw Baw Village